Bisikileta Derailleurs aoriana Pulley kodia tanimanga mitondra Jockey kodia
* 14T tery manerana nify kodiarana mpitarika lanja: 12g
* Material: AL7075-T6 aluminium firaka CNC machining
* Fametrahana haben'ny: 6MM / 5MM / 4MM
* Color: Anode mena, karazana verinia, manga, volamena, titane
* Mitondra: vy baolina / safiotra tanimanga vokany / tanimanga-jaza
* Sehatra fampiharana; fa ny mpitari-dalana ambany kodiarana ny fifindran'ny, azafady mampiasa ny 12T tery manerana nify kodiarana izany mpitari-dalana pulley.
* Ity vokatra na ny fanaka AL7075-T6 manodidina CNC fisotroana. Vita tamin'ny diamondra antsy, dia manana diamondra-tahaka ny metaly mihasimba, nefa niseho tahaka ny ny vokatra dia mahatohitra ny friction fanondroana. Tsara rehetra. Ny hanahafana ny Japoney dehibe vy baolina soson'ny, ny fihodinan'ny tsy misy fanoherana, izay indrindra mampihena ny frictional fanoherana ary manatsara ny mitaingina fahombiazana.
Bisikileta Derailleur novakiny Cable
Bisikileta Derailleur Pulley